Amin’ny maha-Salvadoreana ahy, marika fiainana azo antoka i Etazonia ho ahy saingy rava izany ankehitriny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2020 4:52 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Ελληνικά, русский, Français, Português, English
Asakanton'i Pamela Chavez, avy amin'ny sarimihetsika fohy nosoratany Caracol Cruzando, nahazoana alàlana.
Navoaka voalohany tao amin'ny Central American News ity lahatsoratra ity.
Any Etazonia, nanambara ny sampan-draharahan'ny Fampiharan-dalànan'ny fifindramonina sy ny fadintseranana ary avy eo nanaisotra ny lalàna milaza fa ny mpianatra vahiny dia tsy maintsy miala ny firenena raha tsy manatrika kilasy. Tany am-piandohan'ity fahavaratra ity, nanome baiko ny birao hanaiky ny Fanemorana ny Fandraisana ny Fidiran'ny Ankizy (DACA) ny Fitsarana Tampony. Nahemotra ny famoahana ny Karatra Maitso ka nahatonga ireo mponina maharitra mety ho voaroaka. Tandindonin-doza amin'ny mety ho fahataperan'ny visa mialoha ny ahafahan'izy ireo mody ny mpizahatany raikitra any Etazonia noho ny fanakatonana ny sisintaniny. Mitovy amin'izany ary angamba mampiahiahy kokoa ny filazana fa mila vatsy famonjena 1,2 lavitrisa dolara amerikana avy amin'ny governemanta ny Sampan-draharaha misahana ny Zom-pirenena sy ny Fifindramonina any Etazonia (USCIS) mba tsy handroahany mpiasa miisa 13 400. Tsy resahana intsony amin'izany ny karazana politika mikendry ny hanakanana ireo mpitsoa-ponenana sy ny fandroahana ireo olona tsy manana taratasy.
Nakaton'ny fireneko ao El Salvador ny seranam-piaramanidina hatramin'ny nanambarana ny baiko fihibohana ny volana Martsa. Sarotra ny toe-draharaha ho an'ireo tafahitsoka any Etazonia toa ahy. Sidina roa ihany tamin'ny volana Jolay no natolotry ny Avianca, ilay oriasam-pitaterana an'habakabaka hany mikarakara sidina fiverenana. Mila miantso ny masoivoho , miandry amam-bolana, ary mividy tapakila raha misy toerana amin'ireo sidina vitsivitsy miala any Etazonia raha mba te ho tafiditra ao anaty lisitry ny governemanta Salvadoreana ho an'ireo olom-pirenena izay mahazo alàlana hiditra ny sisintany mihidy ao El Salvador.
Ohatra, azoko lazaina fa sady ahafahako miaina milamina amin'ny maha-queer ahy no sady ahafahako mampiroborobo ny fianarako ihany koa ny visa ho an'ny mpianatra F1 azoko. Na izany aza, ho lany ny fe-potoana an'io visa io alohan'ny hisokafan'ny seranam-piaramanidina ao El Salvador. Nameno taratasy mba hanovako ny visa-ko ho visa ho an'ny mpitsidika aho rehefa avy nikaroka lalina sy nandinika ny pejin'ny tranonkala USCIS . Na dia voamarina aza fa afaka mijanona ara-dalàna aho mandritra ny fe-potoan'ny dingana dia tsy haharay filazana momba ny fangatahana nataoko aho raha tsy afaka 2 volana sy tapany ka hatramin'ny efa-bolana ary mety mbola ho ela kokoa noho izany aza. Sady tsy afaka miasa na mianatra anefa amin'izany. Vokatr'izany, tsy maintsy mitady vola hanampiana ahy ny fianakaviako.